रातो गुलाबी ओठ चाहानुहुन्छ ? यी ६ गल्ती नगर्नुहोस नत्र विस्तारै बन्दै जान्छ ओठ कालो - Nawalpur Dainik
रातो गुलाबी ओठ चाहानुहुन्छ ? यी ६ गल्ती नगर्नुहोस नत्र विस्तारै बन्दै जान्छ ओठ कालो
March 13, 2021 by Nawalpur Dainik
काठमाडौँ । महिला होस् वा पुरुष । आफ्नो ओठ गुलाबी होस् भन्ने चाहाना सबैको हुन्छ । तर, हामी जानअनजान केही यस्ता गल्ती गर्न पुग्छौं, जसले ओठ कालो बनाइरहेको हुन्छ ।
जान्नुहोस्, ती ६ गल्ती
बढी कफी पिउनु: दिनभरमा १/२ पटक कफी पिउनु ठीकै मानिन्छ। तर, त्योभन्दा बढी मात्रामा कफी पिउनाले यसमा रहेको क्याफिनले ओठलाई विस्तारैविस्तारै कालो बनाउँदै लग्छ।
कम पानी पिउनु : कम पानी पिउनाले डिहाइड्रेसन हुन्छ । यही कारण ओठ सुक्न थाल्छ र कालोपन आउन थाल्छ।
दाँतले टोक्नु : केही व्यक्तिको दाँतले ओठ टोक्ने वा रगड्ने बानी हुन्छ। यसो गर्नाले ओठमा सुख्खापन आउन थाल्छ र ओठमा कालोपन आउन थाल्छ।
धुम्रपान: चुरोटमा रहेको निकोटिनले ओठको छालालाई डढाईदिन्छ। यसले ओठ कालो हुन थाल्छ।
एन्टिबायोटिक औषधि : लामो समयसम्म एन्टिबायोटिक औषधि खाइरहेमा शरीरमा यसको नराम्रो असर पर्न थाल्छ र ओठ कालो हुँदै जान्छ।
रासायनिक पदार्थ : रासायनिक लिपिस्टिक वा लिप बाल्म लगाउनाले ओठमा नराम्रो असर पर्छ र ओठमा कालोपना आउन थाल्छ।
समाधानका लागि यी हुन् घरेलु उपाय/गुलाबी बनाउन अपनाउनुहोस् यी उपाय
२.दूधको तर ओठको सुख्खापन हटाउँन थोरै तर ९मलाई० मा एक चिम्टी बेसार मिसाएर नियमित रुपमा बिस्तारै मालिस गर्नुहोस् । यसले केही दिनमै ओठ मुलायम र गुलाबी भएको पाउनुहुनेछ ।
४.कागती कागतीले पनि ओठको कालोपन हटाउँछ । यसका लागि निचोरेको कागती बिहान बेलुका आफ्नो ओठमा बिस्तारै रगडेर लगाउनुहोस् ।
५. केसर काँचो दूधमा केसर मिसाएर पिसी ओठमा लगाउनुहोस् । यसबाट ओठको कालोपन हटी आकर्षक बन्छ । ६। मह महको प्रयोगले केही दिनमै ओठ चमकदार र मुलायम हुन्छ ।यसका लागि थोरै महलाई आफ्नो औंलामा लिएर बिस्तारै ओठमा लगाउनुहोस् या महमा थोरै स्वाग मिसाएर ओठमा लगाउनुहोस् । दिनमा दुइपटक यो उपाय अपनाउनाले केही दिनमै असर देखिनेछ ।
Nextछिटो-छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? यसरी घरमै उपचार गर्नुहोस्